Shuruudaha Adeegga | Farmashiyaha RXS
1 Sharciga Sharciga
2 Shuruudaha & Siyaasadaha:
2.1 Ereyada aasaasiga ah
2.2 Xuquuqda & xayiraadaha
Iibiyaha ayaa si cad u beeninaya dhammaan damaanadaha midkoodna lagu muujiyey ama lagu muujiyey dammaanad ganacsi ama jirdhis ujeedo gaar ah. Diidmadaan iibiyuhu sinnaba uma saameynayo shuruudaha dammaanadda soo-saaraha haddii ay jiraan. Lahaanshaha alaabooyinka halkan lagu iibsanaayo iibiyahu wuu sii hayaa ilaa alaabtu ay si buuxda uga bixinayaan iibsadaha isla markaana wakhtigaas cinwaanku u wareegayo iibsadaha Haddii badeecadaha halkan lagu iibsanaayo loo iibsanayo ujeedo dhoofin, iibsadaha waa inuu ka helaa Dowladda Federaalka dukumiintiyo dhoofinta ah kahor intaan loo dhoofin dal shisheeye. Intaas waxaa sii dheer, dammaanadaha soo saarayaasha ee alaabada la dhoofiyey way kala duwanaan karaan ama xitaa waxay noqon karaan wax aan waxba ka jirin Haddii aad su'aalo qabtid, fadlan weydii. Mas'uuliyad kasta iyo dhammaanteed waxaa loogu talagalay oo keliya alaabada la soo iibsaday.
Shuruudaha & Siyaasadaha:
Ereyada aasaasiga ah
Dhamaan qiimayaasha iyo alaabada, waxaan xaq u leenahay inaan wax ka bedel ku sameyno qaladaadka jira awgeed, isbedelka xaaladaha suuqa, joojinta wax soo saarka ama khaladaadka qoraalka ee xayeysiinta. Allegro mas'uul kama aha isbeddelada qiimaha soo saaraha, oo dhici kara wakhti kasta ogeysiis la'aan. Sawirada sheyga ee boggan shabakadda waxaa laga yaabaa inaysan si sax ah uga tarjumeyn sheyga aad heshay. Dib u eegista naqshadaha iyo kala duwanaanta midabka ayaa jiri kara.
Fadlan xafid dhamaan qalabka wax lagu rido iyo dukumiintiyada haddii ay dhacdo in qalabkaaga wax laga qabto ama la soo celiyo. Kahor soo celinta shey kasta, waa inaad heshaa lambarka Oggolaanshaha Badeecada Soo noqoshada (RMA). MAYA soo celinta, nooc kasta ha noqotee, waa la aqbali doonaa iyada oo aan lahayn lambar RMA ah. Fadlan hayso macluumaadka soo socda gacanta markaad wicayso lambarka RMA: magaca macaamilka, lambarka qaansheegta, nambarka taxanaha iyo nooca dhibaatada.
Xuquuqda & xayiraadaha
Xubnaha waa inay ahaadaan ugu yaraan 18 sano.
Xubnaha waxaa la siiyay waqti xaddidan, oo aan gaar ahayn, dib looga noqon karo, aan la gudbin karin, iyo mid aan hoos-imaan karin xuquuq ay ku helaan qaybtaas koorsada internetka ee u dhiganta iibsashada.
Qeybta koorsada khadka tooska ah ee u dhiganta iibsiga ayaa loo heli karaa xubinta illaa inta koorsada ay dayactireyso Shirkadda, taas oo noqon doonta ugu yaraan hal sano kadib iibsiga xubinta.
Fiidiyowyada koorsada waxaa loo bixiyaa sidii fiidiyoow fiidiyoow ah oo aan la soo dejin karin.
Marka la ogolaado in la siiyo marin-u-helka noocaas ah, Shirkadda kuma qasbanaan nafteeda inay ilaaliso koorsada, ama inay ku sii hayso qaabkeeda hadda.